Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > အထူးကဏ္ဍ > သုတေသန > ၈ လေးလုံး အထူး
ငွေရတု တိုင်တော့မယ့် ရှစ်လေးလုံး	ကြာသပတေးနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၉ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၂၅ မိနစ်	နှင်းပန်းအိမ်	နို့ဖိုး ဒုက္ခသည် စခန်း ဗုဒ္ဓဝိဟာရ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝကနေ ရှစ်လေးလုံး ၂၄ နှစ်မြောက် အခမ်းအနား လာသူတွေကိုထွေးစွာ ကြိုဆိုနေပါ ...
ဒီမိုး ... ဒီရေ ... ဒီလူတွေနဲ့ ကျနော်တို့ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ	ကြာသပတေးနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၆ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၀၆ မိနစ်	အထူးကဏ္ဍ	- ၈ လေးလုံး အထူး	လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၁ နှစ်တုန်းက လူသိန်းပေါင်းများစွာ လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ တခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်က တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီ ပြောင်းလဲရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်ဟာ နှစ် ၂ဝ အတွင်း ...
အနှစ် ... နှစ်ဆယ် လွန်သော်	ကြာသပတေးနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၆ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၀၀ မိနစ်	အထူးကဏ္ဍ	- ၈ လေးလုံး အထူး	တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းထားတာ ၂၁ နှစ် ရှိပါပြီ။ အနှစ် ၂ဝ ဆိုတဲ့ ကာလဟာ လူ့သက်တမ်းရဲ့ သုံးပုံတပုံ ကာလပါ။ နိုင်ငံတခုအတွက် ဆိုရင်လည်း နှစ် ၂ဝ ကာလဟာ အခြေအမြစ်ကစပြီး ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့ အချိန်ပါ။ ...
နွေဦး အဘယ့်ကြောင့် နောက်ကျနေပါလိမ့်	ကြာသပတေးနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၆ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၅၀ မိနစ်	အထူးကဏ္ဍ	- ၈ လေးလုံး အထူး	စစ်တောင်းမြစ်ဆိပ် ကုန်းထိပ်တွင် ခြေစုံရပ်ရင်းက သူ့စိတ်တွေ အပြင်းအထန် လှုပ်ရှားနေသည်။ အတန်ကြာအောင် မလှုပ်မယှက်ရပ်နေရင်း ကမ်းပါးအောက်က စက်လှေနှစ်စီးကို ငုံ့ကြည့်နေမိသည်။ ကမ်းစပ်တွင်မူ လူတယောက်မျှ မတွေ့ရ။ ...
မျိုးဆက်မပြတ်သေးသည့် ရှစ်လေးလုံးခရီး (ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်) သောကြာနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၈ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၂၂ မိနစ်	စက်တင်ဘာကိစ္စတို့ အထူးသဖြင့် မင်းကိုနိုင်တို့၊ ကိုကိုကြီးတို့ လွတ်လာပြီး နောက်ပိုင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေက ပြန်ပြီး ညွှန်းဆိုနေတာက ရှင်းရှင်းပြောရရင် သူ့မျိုးဆက်နဲ့သူပဲ။ အချိန်တန် ပေါ်လာမှာပဲ။ တိုက်ပွဲဝင်မယ့် သူရဲကောင်းဆိုတာ ခေတ်မရွေး ပေါ်လာမှာပဲ ...
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုထွန်းမြင့်အောင် နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်	သောကြာနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၈ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၄၁ မိနစ်	ဒီနှစ် ၂ဝ လုံးလုံးမှာ ဖမ်းဆီးတာ ရပ်ခဲ့တာမှ မဟုတ်တာ၊ ဒီလိုဖမ်းလိုက်၊ ထောင်ထဲထားလိုက်၊ ပြီးတော့ ပြန်ထွက်လာလိုက်။ ၂ဝဝ၇ စက်တင်ဘာ လှုပ်ရှားမှုကြီးက မျိုးဆက်သစ် တရပ်ကို မွေးထုတ် ပေးလိုက်တယ်လေ။ ...
ဒို့ခေတ်ကြမှ ညံ့ကြတော့မှာလား ...	စနေနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၂ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၁၃ နာရီ ၄၇ မိနစ်	လွတ်မြောက်ရေး တိုက်ပွဲများ၏ အစက ၁၉၂၀ ကျောင်းသားသပိတ်က ဟူ၍ သမိုင်း စကားဆိုရမည်။ လက်ဆင့်ကမ်း ပြေးပွဲကဲ့သို့ လွတ်မြောက်ရေး တိုက်ပွဲအလံအား အဆင့်ဆင့် လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ကြသည်။ လူ့တန်ဖိုးပီသစွာဖြင့် သမိုင်းတွင် သူဖြတ်သန်းခဲ့ရသည့် သမိုင်း ခေတ်များ၌ အလံငယ်အား လှမ်းယူ ဆုပ်ကိုင်ခဲ့ ...
We have 163 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved